Intel ကမိတ်ဆက် Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Desktop ကိုကွန်ပျူတာ - သတင်း Rule
Intel ကမိတ်ဆက် Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Desktop ကိုကွန်ပျူတာ
CHIPMAKER Intel က Iris က Pro ကိုဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ updated ချစ်ပ်များက powered desktop ပေါ်မှာ PC များအပါအဝင်အတော်များများ devices တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်, အနှေးကွေး PC ကွန်ပျူတာစျေးကွက်ကိုနေသော်လည်း.
ယခုနှစ်အတွင်းလာမယ့်အသစ်ပုံစံကိုအချက်များ mini ကို PC များနှင့်ခရီးဆောင် All-In-One စနစ်များပါဝင်, တက power-saving ပြည်နယ်အတွက်င်ပင်တဲ့အခါ PC ကိုချိတ်ဆက်နေဖို့ခွင့်ပြုအဆငျသငျ့ Mode ကိုနည်းပညာပါရှိပါတယ်တံ့သော.
gen desktops တွေနဲ့လာမယ့်ပါဝါက Intel စတုတ္ထမျိုးဆက် core chip
ကိရိယာ၏အသစ်အတန်းအစားဘက်ထရီနှင့်အတူတစ် 20in touchscreen နှင့် docking station သို့ slot မှစွမ်းရည်သို့ built တစ်ဦးကို PC ဖြစ်ပါသည်.
Deutsch: Intel ရဲ့ core ကို i7-970 အောက်ခြေမှာ (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
လက်တော့ပ်များနှင့်အခြား devices များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအစဉ်အလာက desktop PC ကွန်ပျူတာစနစ်၏က​​ျဆင်းမှုနေသော်လည်း, Intel ကသူ့ရဲ့အသစ်လိုင်းရောနှောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စားသုံးသူနှစ်ဦးစလုံးမှအယူခံဖို့ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်များထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ရုန်းကန်နေ PC ကိုစျေးကွက်ကပြန်လည်ရှင်သန်လိမ့်မည်မျှော်လင့်.
“desktop ပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Intel ရဲ့များအတွက်ကြီးမားသောနှင့်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ငါတို့သည်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ် – ပုံစံကိုအချက်များ reinventing, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အတွေ့အကြုံများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ,” ၎င်း၏ Desktop ကိုလိုင်းပလက်ဖောင်း Group ၏ Intel ရဲ့ VP နဲ့ GM ကပြောပါတယ်, Lisa ကို Graff.
အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သော Intel ရဲ့ NUC အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ပုံစံကိုအချက်တစ်ချက် PC များ (ကွန်ပျူတာ၏ Next ကိုယူနစ်), အ chipmaker က Black Brook လို့ခေါ်တဲ့ All-In-One ကိုကိုးကားဒီဇိုင်းကိုမိတ်ဆက်ပြသ, သောက Windows များအတွက် touchscreen က features 8, display ကို 27in အထိအရွယ်အစား, ကထရံကို socket မှ tethering ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲသုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြည်တွင်းရေးဘက်ထရီ.
Black က Brook တစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံ Intel က Realsense 3D ကင်မရာကလည်းပါဝင်သည်, တစ်ဦးပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad မိုက်ခရိုဖုန်းခင်းကျင်း, ပရီမီယံအသံနဲ့ full HD display ပါ.
Intel ကလည်းဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းလာမယ့်အသစ်စတုတ္ထမျိုးဆက် Core ပရိုဆက်ဆာအသေးစိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းအဘို့အခွင့်ပြုရန်တစ်ဦးတိုးတက်လာသောအပူ interface နဲ့ CPU ကိုထုပ်ပိုးနှင့်အတူမာရျနတျရဲ့ Canyon အအမည်ဝှက်ပေးထားသောချစ်ပ်အပါအဝင်, နှင့်တစ်ဦး Core i7 အလွန်အမင်း Edition ကို Core ရှစ်အထိထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် 16 DDR4 မှတ်ဉာဏ်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူချည်.
Intel ကလည်းက Broadwell အမည်ဝှက်ပေးထားသော၎င်း၏လာမည့်ပဉ္စမမျိုးဆက် Core ချစ်ပ်များ၏ desktop ကိုဗားရှင်းကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်, ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုးတက်မှုကယ်နှုတ်ရန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ desktop ပေါ်မှာမှ၎င်း၏ Iris က Pro ကိုဂရပ်ဖစ်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်.
အဆင်သင့် Mode ကိုနည်းပညာ, ရာကို select လုပ်ပါ OEM စနစ်များအပေါ်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည် 2014, အဆင်သင့်ဆက်လက် PC များဖွင့်ဖို့ Intel ရဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက် Core ချစ်ပ်ထဲမှာ power-saving ပြည်နယ်များ၏အားသာချက်ယူပြီးအမြဲပင်တဲ့အခါ power-saving ပြည်နယ်အတွက်ချိတ်ဆက်တဲ့စွမ်းရည်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်. ဒါဟာ PC ကိုအစဉ်မပြတ်အိမ်တွင်အခြား devices များမှမီဒီယာ stream ဖို့အဆင်သင့်ကြောင်းသေချာစေရန်အသုံးပြုရစေခြင်းငှါ,, ဥပမာအားဖြင့်, ကုမ္ပဏီအညီ.
ဒီဇင်ဘာလ၌, လေ့လာဆန်းစစ်မတ်မတ် IDC မှ PC ကွန်ပျူတာရောင်းအားမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ထက်ပိုမိုဆိုးရွားကျဆင်းပြောပါတယ် 2013, စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet စားသုံးသူနည်းပညာကိုစျေးကွက်ကကြီးစိုးဆက်လက်အဖြစ်.
“ကမ္ဘာတစ်ဝန်း PC တင်ပို့ရောင်းချမှုကျဆင်း -10.1 ရာခိုင်နှုန်းကပြီးခဲ့သည့်နှစ်က,” IDC မှပြောကြားခဲ့သည်, ၏ယခင် projection ထက်အနည်းငယ်ပိုပြီး -9.7 ရာခိုင်နှုန်းက, ဒါကြောင့်အောင် “စံချိန်အပေါ်ဝေးအားဖြင့်အများဆုံးပြင်းထန်တဲ့နှစ်စဉ်ကျုံ့”. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, Intel ရဲ့ PC ကိုစျေးကွက်ကရုန်းကန်နေရပေမယ့်နောက်မျိုးဆက်က desktop ကွန်ပျူတာများကိုထုတ်ဖော်ပြသ, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်အတူဒီနေရာမှာ posted ဖြစ်ပါတယ်
22363	0 Broadwell, central processing unit, စားပွဲတင်ကွန်ပြူတာ, Intel က, Intel Core, ကွန်ပျူတာ၏ Next ကိုယူနစ်, ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ, Windows ကို 8
← ဟက်ကာများသည်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဆိုဒ်များတိုက်ခိုက်ကြ ! လူသားတွေဟာတစ်ထရီလီယံအနံ့ detect နိုင် →